बुढेसकालमा विबाह गरेकी मिथिला शर्मालाई फेरी के भयो ? – Gazabkonews
बुढेसकालमा विबाह गरेकी मिथिला शर्मालाई फेरी के भयो ?
पुजाका आफ्नै भाईले खुलाए आकाशसङ्ग सम्बन्ध बिग्रनुको कारण
अभिनय गरेरै राम्रो आम्दानी गरिरहेकी कालीबुढीलाई के भयो फेरी ? रुँदै हिँड्नु पर्ने अवस्था कसरी आयो ?
चर्चित गायक पुष्कल शर्मालाई के भयो ? उपचार गराइरहेको दृश्य रातारात बन्यो भाइरल
चर्चित कलाकार आशा खड्काले गरिन् प्रहरीका हाकिमसँग सुटुक्क विबाह
के भयो चर्चित कलाकार बुद्धि तामागं हैटलाई ?
हल्का रमाइलोकी चर्चित कलाकार इस्टु कार्की समातिइन्, इस्टु घरबाट नै समातिएपछि भयो खैलाबैला, आखिर के गल्ति गरिन् इस्टुले ?
in top news, मनोरञ्जन
बुढेसकालमा विबाह गरेकी मिथिला शर्मालाई फेरी के भयो ? उठ्नै नसक्ने भएपछि मिथिलाको घरमा उनकी बहिनी पुगीन् , मिथिलाका पति यस्तो अवस्थामा कहाँ गए ?
विबाह गरेको छोटो समयमा नै फेरी के भयो श्वेतालाई ? विबाह अघि श्रीकृष्णको सम्झनामा बिरामी परिरहने श्वेतालाई विबाहपछि यस्तो समस्या परेछ, अस्पतालको बेडबाट खोलीन् रहस्यको पोको
रंग शालालाई पैसा जुटाउँदा जुटाउँदै टाट पल्टेपछि धुर्मुसले सुरु गरे चितवनमा नै हजारौँको संख्यामा लोकल कुखुरा पालन ब्यबसाय, करोडौँको लगानीमा धुर्मुसले कुखुरा र बाख्रा पाल्न थालेपछि सैयौँले पाए रोजगारी, यस्तो देखियो धुर्मुसको भब्य ठूलो कुखुरा पालन ब्यबसाय, हेर्नुहोस् भिडियो
मैलुङ खोला जलविद्युतको आईपीओ बिक्री खुला मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले आज (साउन १४ गते) देखि सर्वसाधारणमा प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन ल्याएको छ। कम्पनीले प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यमा ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता शेयर निष्काशनमा ल्याएको हो।
त्यसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात १४ हजार ७२६ कित्ता शेयर कर्मचारीहरुलाई र ५ प्रतिशत अर्थात ३६ हजार ८१४ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। त्यसपछि बाँकि रहने ६ लाख ६८ हजार ७४६ कित्ताका लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीले निष्काशन गेरको शेयरमा साउन १८ गतेसम्ममा आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस अवधिसम्ममा मागअनुसार आवेदन नपरे साउन २८ गतेसम्म म्याद थप हुनेछ। कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम एक लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको आईपीओमा
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, तोकिएका शाखा कार्यालयबाट र मेरो शेयर मोबाइल एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ। हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी २९ करोड ४५ लाख १४ हजार ४०० रुपैयाँ रहेको छ। सर्वसाधारणमा आईपीओ बिक्री गरेपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३६ करोड ८१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।
कम्पनीले निष्काशन गरेको आईपीओलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी डी रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीले वित्तीय दायित्व पुरा नगरेको वा छिटै पुरा गर्न नसक्ने जनाउछ। कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभुतकर्तामा सनराईज क्यापिटल रहेको छ।